* Le NDLU INCINCI * eMinnesota Lakeshore - I-Airbnb
* Le NDLU INCINCI * eMinnesota Lakeshore
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguKim
Ngokuqinisekileyo Le Ndlu incinci yindlu encinci eyakhiwe ngebhayisekile, epakishwe kwindawo entle ecaleni komgangatho omkhulu ojongene nechibi.
Ebudeni bentwasahlobo, ehlotyeni, nasekwindla, kukho ii-kayaks ukuze uphume emanzini! Kukho nendawo yokoja nomngxuma womlilo. Zincede ufumane iinkuni uze wonwabele ilanga ngoxa litshona!
Indlu encinci ipholile kakhulu ebusika!
Isetingi efanelekileyo yeholide. Yiza nencwadi uze uzihlaziye! Yonwabela ubuhle bexesha lonyaka. Khuthazwa kukudala kuka Thixo!
* Ngokuqinisekileyo Le * yindlu yamaplanga yaseMinnesota esechibini enezinto ezinokonwatyelwa zale mihla ezincinci!
Le Ndlu incinci yakhiwa yaza yafakwa kumboniso we-TV, i-Tiny House Nation, ngo-2015. Ixesha lonyaka 1, Isiqendu 8. Unokufumana isiqendu kwi-Amazon Prime okanye ku-YouTube, enesihloko esithi: Imper Sq Ft Minnesota Prairie Cottage.
Intsapho yethu yabantu abane yahlala apho iminyaka eyi-4.5 kwaye yayithanda umzuzu ngamnye! Abantwana sebekhulile ibe besidinga indawo engakumbi. Ngoku sifuna ukwabelana nawe ngothando lwethu ngokuphila okuncinci!
4.99 out of 5 stars from 166 reviews
4.99 · Izimvo eziyi-166
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi166
Ichibi iRoberds lichibi elihle elijikelezwe ziipati ezintle, abantwana abatsibayo, abadobi, imililo yokukhempisha nendalo. Ukugcinwa kwesithethe nokwenza iinkumbulo kwifashoni yaseMinnesota.
Kukho iindawo ezimbini zokukhempisha ezikufutshane echibini. IWinjums inevenkile yokutyela epheleleyo kunye nebhari kwaye iRoberds Lake Resort inikezela ngee-donuts ezenziwe ekhaya kusasa kunye ne-ice cream imini yonke!
Indlu Encinci ikwiimayile eziyi-8 kuphela ukusuka e-Vintage Escapes Winery & Vineyard!
I-Faribault inikezela ngeendlela zebhayisekile ezimangalisayo, i-River Bend Nature Centre, i-Faribault Woolen Mill, ii-10,000 Craft Distillers, kunye nesidlo sethu sakusasa esithandwayo, i-Rack of Dawn, ivuliwe ngoLwesine - ngoMgqibelo ngo-7: 30-1: 30: 30 inikezela ngee-cinamon rolls, isonka esitsha, ii-soups ezenziwe ekhaya, ikofu ephilayo kunye nesonka esingenayo i-gluten!
Iidolophu ezikufutshane ziquka iOwatanna (iCabela 's kunye neMedford Outlet Centre) kunye neNorthfield (iSt. Olaf kunye neCarleton Colleges, iLoon Distillery, iivenkile zezinto zakudala kunye neMarike Yamafama ngeMigqibelo yehlobo kwiRiverside Park).
Le ndlu incinci ikumgama weemayile eziyi-45 kuMzantsi weMall of America, iSikhululo Seenqwelo-moya i-Treasure Island i-Casino, kunye ne-Minnesota Zoo, imizuzu eyi-38 kuMzantsi weValleyfair, iimayile eziyi-50 ukusuka eMinneapolis (Inkundla ekujoliswe kuyo, iMinnehaha Park, iMinneapolis Institute of Art, iGuthrie Theatre) kunye neyure eyi-1 ukusuka eSt. Paul (iXcel energy Centre, iRice Park, iThe Ordway).
Umbuki zindwendwe ngu- Kim
Qhagamshelana nam nanini na! Ndihlala kude ngemizuzu eyi-10, edolophini. Ndiza kukunceda ngexesha lokuhlala kwakho! Ndiyathemba ukuba ndiza kudibana nawe ngokukhawuleza emva kokuba ufikile! Kodwa ke, ukuba loo nto ayisebenzi, ungangena lula ngekhowudi kwindawo yethu yokungena engenazitshixo.
* Ukuhlaziywa kokungasondeli ebantwini! Sinokuthetha ngokulula umzuzwana ngaphandle komgangatho xa ufika.
Qhagamshelana nam nanini na! Ndihlala kude ngemizuzu eyi-10, edolophini. Ndiza kukunceda ngexesha lokuhlala kwakho! Ndiyathemba ukuba ndiza kudibana nawe ngokukhawuleza emva kokuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Faribault